Wholesale Inert uye Polymer mabheji Mugadziri uye Mutengesi | Dongli
Dongli's Inert / Spacer resin anoshandiswa kugadzira chipingamupinyi mumubhedha wekutsinhana weion uye chengetedza iwo maoneti ekuchinjana marozari chaipo pavanofanirwa kunge vari. Vanogona kuchengetedza vateresi vepazasi, ivo vekuparadzira vepamusoro uye vanogadzira kupatsanurana pakati pekate uye anion materu mune yakavhenganiswa mubhedha. Inert / Spacer resini inouya muhukuru hwakasiyana uye masisitimu ekuvhara akasiyana siyana masisitimu ekugadzirisa.
Resins Chimiro chePolymer Matrix Chitarisiko Fomu Kuonekwa Particle Saizi Yakananga Giravhiti Kutumira Kurema Pfeka kugona Zvinodzidzisika
DL-1 Polypropylene Yakachena Spherical Beads 02.5-4.0mm 0.9-0.95 mg / ml 300-350 g / L. 98% 3%
DL-2 Polypropylene Yakachena Spherical Beads Φ1.3 ± 0.1mmL1.4 ± 0.1mm 0.88-0.92 mg / ml 500-570 g / L. 98% 3%
STR Polypropylene Yakachena Spherical Beads 0.7-0.9mm 1.14-1.16 mg / ml 620-720 g / L 98% 3%
Ichi chigadzirwa hachina boka rinoshanda uye hapana ion yekuchinjana basa. Kuwanda kwehukama kunowanzo dzoreredzwa pakati pe anion uye cation resini yekuparadzanisa anion uye cation resins uye kudzivisa kusvibiswa kwemuchinjikwa we anion uye cation resins panguva yekumutsiridzwa, kuitira kuti kumutsidzira kuve kwakazara.
Inert resin inonyanya kushandiswa pakurapa kwemvura ine huwandu hwemunyu; Yakakura yakawanda yekunyoroveswa kwemvura uye dealkali kurapwa; Neutralization yemarara acid uye alkali; Kurapa kwemagetsi emvura yakasviba ine mhangura uye nickel; Inogona zvakare kushandiswa kupora uye kurapwa kwemarara emvura, kupatsanura uye kuchenesa kwemakemikari emishonga. Vanhu vazhinji havana kujeka nezve mashandiro uye mashandisiro einert resins. Ngatitarisei pane zvinotevera:
1. Inoita basa rekuparadzira patsva panguva yekuvandudzwa.
2. Panguva yekushanda, inogona kukamura resini yakanaka kuti isavharira gomba rekubuda kana gapuro revhavha yefaera.
3. Rongedza resini yekuzadza chiyero. Iko kunaka kwemubhedha unoyangarara kune hukama neresini yekuzadza chiyero. Iyo yekuzadza chiyero ishoma kwazvo kuti iite mubhedha; Kana iyo yekuzadza mwero yakanyanya kukwirira, iyo resin inozadzwa kumusoro mushure mekushandurwa uye kuwedzera, uye chena bhora inogona kutamba diki diki basa mukugadzirisa.
Chengetedzo yekushandisa kweInert Resin
Rudzi urwu rwe resin runogadzikana kwazvo pasi pechinyakare kuchengetedza uye mamiriro ekushandisa. Iyo insoluble mumvura, acid, alkali uye organic solvents, uye haina kuita nawo.
1. Kubata, kurodha uye kudzikisa mashandiro anofanirwa kuve akapfava, akatsiga uye akajairwa, usarova zvine simba. Kana ivhu rakanyorova uye richitsvedza, teerera kudzivirira kutsvedza.
2. Iyo tembiricha yekuchengetera yechinhu ichi haifanire kunge iri pamusoro pe90 ℃, uye tembiricha yebasa inofanira kuva 180 ℃.
3. Tembiricha yekuchengetera iri pamusoro pe 0 ℃ mune nyoro mamiriro. Ndokumbirawo kuti chengetai pasuru yakanyatsovharwa kuitira kurasikirwa nemvura panguva yekuchengetedza; Kana paine kushaya mvura, iro rakaomarara resin rinofanira kunyoroveswa mu ethanol kwemaawa anenge maviri, ichicheneswa nemvura yakachena, wozotorwa zvekare kana kushandiswa.
4. Dzivirira bhora kutonhora uye kutsemuka munguva yechando. Kana kutonhora kukawanikwa, nyunguduka zvishoma nezvishoma panopisa tembiricha.
5. Mukufamba kwekutakura kana kuchengetedza, zvinorambidzwa zvachose kuturika nekunhuhwirira, zvinhu zvine chepfu uye makemikari akasimba.
Pashure: Yakavhenganiswa Mubhedha Resin
Zvadaro: Macroporous Adsorptive Resins